သကျတနျ့ခြို: March 2010
ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဂဏန်းကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးဂဏန်းဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ပြီးတော့ လည်း ကြီးထွား လျှက်ရှိ ပါသေးတယ် ။ ဒီအကောင်ကြီးကို အရွယ်အစားကြီးလွန်းတဲ့အတွက် ဂေါ်ဇီလာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ သူတို့က Crabzilla လို့ခေါ်ကြပါတယ် ။
ဒီCrabzilla ဟာ ဟိုဘက်လက်မ ကနေ ဒီဘက်လက်မထိ အရှည်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၀ ပေခန့်ရှည် လျှား ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ဒီကောင်ကြီးဟာဆက်လက် ကြီးထွားလျှက်ရှိပါသေးတယ် ။ ဒီကောင်ကြီးကို Pacific သမုဒ္ဒ ယာ ထဲမှာ ငါးဖမ်းသမားတစ်ဦးက ရေထဲမှာ ငါးဖမ်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအကောင်ကြီးဟာ ပင်လယ် သမုဒ္ဒယာထဲမှာ အခုအချိန်အထိ အစားမခံရသေးတဲ့အတွက် ကံကောင်းသွားပါတယ် ။ ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့ ဂဏန်းသားဟာ အလွန်ပဲ ချိန်မြိန်ပြီး အသားစားရေသတ္တ၀ါ အများစုကလည်းနှစ်သက်ကြလို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်ဒီကောင်ကြီးကို အပြင်မှာ မြင်တွေ့ဖူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Brimingham မှ National Sea Life Center မှာ Crabzilla ကို အများပြည်သူတွေ ကြည့်ရှုလေ့လာဖို့အတွက် ပြသထားပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:57 AM 8 comments:
ကျွန်တော်ဟာ ဒီရွှေရောင်စက္ကူပတ်လေးကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လက်ဆောင် ပစ္စည်းလေး ထုပ်ပိုး ပြီး ပေးပို့အတွက် ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ယခုအခါမှာ ရွေးချယ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော့် အလှည့်ရောက်ရှိလာပါပြီ ။ ကျွန်တော် ကတော့ ရွေးချယ်ပြီးပါပြီ ယခုအခါ သင့်ရဲ့ အလှည့်ပါပဲ ။
ဟိုး...တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့ ။ မိခင်တစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ငါးနှစ်အရွယ်သမီးလေးတစ်ယောက်ကို အဖိုးတန်လှတဲ့ ရွှေ ရောင်စက္ကူပတ်လေးတွေကို ဆော့ကစားပြီး ဖြုန်းတီးလိုက်တဲ့အတွက် အပြစ်ပေးပါတယ် ။ ငွေတွေ ကုန်သွား သလို သူ့ရဲ့ သမီးလေးဟာ ရွှေရောင်စက္ကူပတ်လေးတွေကို လေးထောင့်စက္ကူပုံးတွေပြုလုပ်ပြီး ခရစ်စမတ် သစ်ပင် အောက်မှာ အလှဆင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူမဟာ အလွန်ပဲ ၀မ်းနည်းနေခဲ့တယ် ။
သူမဟာ သူမရဲ့ အပြုအမှုတွေတွက် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူမဟာ အဲဒီ လေးထောင့်စက္ကူပုံးလေးတွေကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဘာမှမတွေ့တဲ့အတွက် သူမရဲ့ သမီးလေးအပေါ် သူမရဲ့ ဒေါသတွေ ပြန် ထွက်ခဲ့ရပါတယ် ။ အဲဒီနောက်သူမဟာ သမီးလေးကို ကြမ်းတမ်းစူးရှတဲ့အမူအရာနဲ့ အော်ဟစ် ကြိမ်း မောင်း ခဲ့ပါတယ် ။
" မင်းမသိဘူးလား သမီးငယ် မင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ အဲဒီအထဲမှာ တစ်ခုခု ထည့်ပေး ရမယ် ဆိုတာ မင်းမသိဘူးလား"
အဲဒီနောက်မိခင်ဟာ သမီးငယ်လေးရဲ့ အပေါ်တက်ဖိခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ဒူးခေါင်းနဲ့ လက်တွေဟာ သူမသမီး ငယ်လေး ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို တရကြမ်း ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ မိခင်ဟာ သူမရဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်မဲ့ဒေါသ တွေ နဲ့ သူမသမီးလေးကို ရိုက်ပုတ်ကြိမ်းမောင်းခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီအဖြစ်တွေ ဖြစ်ပျက်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ သူမသမီးငယ်လေးဟာ ကားတိုက်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ အချိန် တို လေးအတွင်းမှာပဲ မိခင်အတွက် နောင်တအကြီးအကျယ်ရသွားစေခဲ့ပါတယ် ။ မိခင်ဟာ သူမရဲ့ ဘ၀ တစ် သက် တာလုံး သမီးငယ်လေးရဲ့ ရွှေရောင်စက္ကူပတ်လေးနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ပုံးလေးနဲ့ သမီးငယ် လေး ရဲ့အိပ်ရာ ကုတင် လေးကို ပဲ အဖော်ပြုနေခဲ့ရပါတယ် ။
သူမအတွက် ခက်ခဲ့တဲ့ ပြသနာတွေ ကြုံတွေ့တိုင်း သူမဟာ အဲဒီစက္ကူပုံးလေးကို ဖွင့်ကြည့်ပြီး ရွှေရောင် စက္ကူပုံး လေးထဲက စိတ်ကူးယဉ်အနမ်းတွေကို ရှာဖွေလေ့ ရှိတယ် ။ ပြီးတော့ သူမဟာ အဲဒီရွှေ ရောင်စက္ကူပုံးလေးထဲမှာပဲ အခြားကလေး ၊ အခြား မိသားစုတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ အနမ်းတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ကို တရှိုက်မက်မက် ရှာဖွေနေလေ့ ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစက္ကူပုံးလေးတွေထဲမှာတော့ မည်သည့်ပစ္စည်းမှ ရှိမ နေခဲ့ပါဘူး.... ။
သင့်မှာ အခု ရွေးချယ်ဖို့ ၂ လမ်းရှိပါတယ် ။
၁ ။ ဒီစာလေးကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေဆီ ပို့ပေးလိုက်ပါ ။ ဒါမှမဟုတ်
၂ ။ သင့်ရဲ့နှလုံးသားကို ထိရှစေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါ ။
သင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ ကျွန်တော်ကတော့ နံပါတ် ၁ ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် ။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ Angels တွေပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပံတွေ ပျံသန်း ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အခါ ဒီ Angels တွေက သင်ကြားပြသပေးပါလိမ့်မယ် ။
သင်ဟာ ဒီစာလေးကို သင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီသူငယ်ချင်းဟာလည်း သင့်လိုပဲ တွေး တောနေမိမှာပါ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:41 AM2comments:
သင့်ရဲ့ချစ်သူကို ပြောပြဖို့အတွက် ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ပါ ။
တစ်နေ့မှာပေါ့ ငါးဖမ်းသမားတစ်ဦးဟာ မနက်အစောကြီး နိုးလာတယ်တဲ့ ။ သူထတဲ့အချိန်က စောလွန်းလို့ ပင်လယ်ထဲသွားဖို့ လုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင်မရသေးပါဘူး ။ ဒါနဲ့ သူလည်း ကျောက်ခဲတုံးတွေကို တွေ့တော့ သူနေထွက်ချိန်ကို စောင့်ဖို့ အချိန်ဖြုန်းဖို့ အကြံရသွားပါတယ် ။ ဒါနဲ့ သူလည်း ပင်လယ်ထဲကို ကျောက်တုံး လေး တွေကို စတင်ပြီး ပစ်ချပါတယ် ။ သူ့လက်ထဲက နောက်ဆုံးကျောက်တုံး ပဲ ကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ နေအ လင်း ရောင်က ထွက်ရှိလာပါပြီ ။ အဲဒီအခါ သူမြင်လိုက်ရတာက အဲဒီကျောက်တုံးဟာ အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ စိန်တုံး ဖြစ်နေတာပါပဲ ။ ပြီးတော့ သူခုနက ပင်လယ်ထဲကို ပစ်ချနေတဲ့ ကျောက်တုံးတွေအားလုံးဟာ စိန်တုံး တွေဖြစ် နေတာကို သူတွေးတောမိသွားသတဲ့ ။ ဒီအခါ သူဟာ အရမ်းကို နောင်တရသွားပြီး သူ့ရဲ့ မစူးစမ်း မဆင်ခြင်ပဲ လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် စိန်တုံးတွေဟာ ပင်လယ်ပြင်ထဲကို ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ် ။
" ဘယ်အရာကို မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ပဲ တဇွတ်ထိုး မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး ။ သင် အဖိုး မတန်ဘူးလို့ ထင်နေ တဲ့အရာ ဟာ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်လာတဲ့အခါ အလွန်အဖိုးတန်တာကို တွေ့ရ ပါ လိမ့်မယ် "
Posted by သက်တန့်ချို at 11:45 AM2comments:
အလွန်ကို အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် ထူးခြားတဲ့ တောင်တက်ဆိတ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သာမန်လူတို့ တက်ဖို့တောင် ခက်တဲ့ တောင်ထိပ်ဖျားတွေဆီကို သူတို့ ခွာတွေနဲ့ မြဲမြံစွာကုပ်တွယ်ပြီးတော့ တက်လေ့ ရှိပါတယ် ။ တောင်ကမ်းပါးယံတွေကိုတွယ်တက်တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ခွာတွေရဲ့ မြဲမြံမှုကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။ သူတိုရဲ့ မျိုးစိတ်က Oreamnos americanus ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ပင်လယ်မြေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပိုင်း တွေ မှာ နေထိုင်လေ့ ရှိပါတယ် ။
သူတို့ကို Rocky Mountain Goat လို့ ခေါ်ပြီး မြောက်အမေရိက မှာ နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိပါတယ် ။ သူတို့မှာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ နောက်တစ်ချက်က သူတို့ဟာ တောင်တက်နေရင်းနဲ့ တောင်နံယံတွေမှာ တွယ်ပြီး နား နေလေ့ ရှိပါတယ် ။ အထီးရော အမရော နှာယောင်တိုပြီး ရှည်လျှားနက်မှောင်တဲ့ ဦးချိုများရှိပါတယ် ။ ဦးချို တွေ က ၁၅ မှ ၂၈ စင်တီမီတာ ထိရှည်လျားပါတယ် ။ ဆောင်းရာသီမှာ သူတို့ရဲ့ သားမွှေးကာတွေဟာ အအေး ချိန် -50'F (-45.6'F) ထိခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လေတိုက်နှုန်း 100 mph (160km/h) လောက်ထိကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:30 AM5comments:
Mont Saint Michel ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ တည်ရှိပါတယ် ။ ဒီအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မှုကို ၁၇၀၉ မှာ စ တင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ၁၈၇၄ ခုနှစ်မှာတော့ ရာဇ၀င်တွင်မယ့် အဆောက်အအုံ အဖြစ် တရားဝင် ကြေငြာ ခြင်း ပြုခဲ့ပါတယ် ။ Mont Saint Michel မှာ ဘုန်းကြီး အယောက် ၅၀ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၈၀ လောက် နေ ထိုင်ပါတယ် ။
တောင်ကုန်း ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားပြီး ဒီအဆောက်အုံဟာ ဒဏ္ဍာရီဆန်လှပါတယ် ။ တောင်ကုန်းဟာ သဲ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ တည်ရှိပြီး ရေတက်တဲ့အခါမှာဆို ရေပတ်လည်ဝန်းရံနေတဲ့ ထူးဆန်းသော နေရာလေး အဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:12 PM3comments:
ကိုဘကြိုင်ကြီး တစ်ယောက် ရဟန်းဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို တနေ့က ဘလော့ထဲမှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ ဒါနဲ့ အချိန်နဲ့ နေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ သန္တာလမ်း ရန်အောင်ကျောင်းတိုက်ဝင်း အောင်သာဝ တီစာ သင်တိုက်ဆိုတော့ မြောက်ဥက္ကလာပ ထဲမှာ ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ် ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မြောက်ဥက္ကလာ ပမှာ နေတာ ဆိုတော့ သူ့ကို သွားတွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။ မနက် ကိုးနာ၇ီခွဲလောက်မှာ ကားစီးပြီး အောင်သာဝ တီစာသင်တိုက်ကို သွားခဲ့ပါတယ် ။ ကိုဘကြိုင်ကြီးနဲ့ တွေ့ရမှာကိုးး)
ကျောင်းတိုက်ဝင်းထဲလည်း ရောက်ရော ဘယ်သူမှ မတွေ့ဘူးခင်ဗျ ။ ဘုန်းကြီး တရားဟောသံတော့ ကြား နေရ တယ် ။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်ကို ကျောင်းတိုက် အတွင်းပိုင်းမှာ လှမ်းတွေ့လိုက်တယ် ။ ဒါနဲ့ အဒေါ်ကြီးကို
" အန်တီ ဒီမှာ ကိုဘကြိုင် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ် ဆိုလို့ ဟုတ်လားမသိဘူး "
" ရှင် ကိုဘကြိုင်မဟုတ်ဘူး ကျွန်မတူလေး သီဟဇော်ပါ "
" ဗျာဟုတ်လား "
အဲဒီအချိန်မှာပါ ဘေးနားက ကောင်လေးတစ်ယောက်က
" ဒေါ်လေး ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ကိုကြီး သီဟဇော်က ကိုဘကြိုင် ဟုတ်တယ်"
လို့ လှမ်းအော်ပြောပါတယ် ။ အောင်မလေး ဘုရားသိကြားမလို့ နို့မို့ဆို ပြန်ရကိန်း မြင်နေပြီ ။ ဒါနဲ့ သူတို့ လမ်းညွှန်လိုက်တာနဲ့ ၀င်ပေါက်နားက စာသင်တိုက်လေးဆီ ပြန်လျောက်ရပါတယ် ။ အပေါ်ထပ်ကို တက်သွား တော့မှ ဘုန်းကြီး က တရားဟော နေပြီး ကိုဘကြိုင်ကြီးက မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်လို့ ( ဘုန်းကြီးဝတ်ကြီးနဲ့နော်) ဘုန်းကြီး တရားဟောတာက ၁၀ နာရီခွဲမှ ပြီးပါတယ် ။ တရားဟောနေတုန်း ဘေးနားက မိန်းကလေး တစ် ယောက် ကို ကိုဘကြိုင်က ဒါပြီးရင် မန္တလေး ပြန်မှာလားလို့ မေးလိုက်တယ်။
" ရှင် ..ကိုကြီး သီဟဇော်က ဒီမှာပဲ နေမှာပါ ကျွန်မ က သူ့ညီမပါ သူမန္တလေး သွားမယ်လို့ တော့ မပြောသေးဘူး "
တဲ့ ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဘလော့မှာ ဖိတ်ထားလို့ လာရတာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြလိုက်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ဘုန်းကြီး တရားဟောနေတုန်း ကိုဘကြိုင်ကြီး အိပ်ငိုက် ( အဲလေ. ဟုတ်ပေါင် ) တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ထိုင်နေတဲ့ပုံပါ ။ တရားဟောပြီးတော့ ရေစက်ချ ပြီးတော့ ကိုဘကြိုင်ကြီး မိခင်က ပိုက်ဆံတွေ ကြဲပါသေးတယ်။ ( ကျွန်တော်တောင် ၀င်လုမလို့ စဉ်းစားသေးတယ် ဟီး ) ဒါနဲ့ ကိုဘကြိုင်ကြီး သင်္ကန်းဝတ်ရုံပြင်ဝတ်နေတုန်း သူ့နား သွားပြီးတော့
" ဦးဇင်းဘုရား တပည့်တော်ကို သိပါသလားဘုရား”
“ တပည့်တော် သက်တန့်ချိုပါဘုရား”
ဆိုပြီး ဦးဇင်းက လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ဦးဇင်း နဲ့ တွဲပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဦးဇင်းက ဘေးက လူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါသေးတယ် ။
" ဟဲ့ ဟဲ့.. ဒါသက်တန့်ချို "
" သက်တန့်ချိုလား ဓါတ်ပုံရိုက်မယ် ဓါတ်ပုံ ရိုက်မယ် "
ဆိုပြီး အုပ်စုလိုက် ဓါတ်ပုံ တွဲရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဦးဇင်းရဲ့ ဘွဲနာမည်က သုန္ဒရ လို့ သိရပါတယ် ။ ( လက်ဝဲ သုန္ဒရ အမတ်ကြီးကို သတိရမိသေးး) ) ဦးဇင်းက ၃၀ ရက်နေ့ လက်မှတ်ဖြတ်ထားပြီး မန္တလေးကြွမယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဆေးခန်းအတွက် ဆေးဝယ်စရာရှိသေးတာနဲ့ ဦးဇင်းကို နှုတ်ဆက်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျွေးတဲ့ ထမင်းကို မစားဖြစ်တော့ပဲ ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ ဓါတ်ခဲက အားနည်းနေတာကြောင့် ပုံတွေကိုတော့ အများကြီး ရိုက်မလာဖြစ်ပါဘူး ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုဘကြိုင်ကို အသက်အကြီးကြီးထင်နေတာ တွေ့လိုက်တော့မှ ကျွန်တော့်ထက်တောင် အရွယ်က ငယ်ပြီး နုနေပါသေးတယ် ။ မလေးက ပြန်လာတာလို့ သိရပါတယ် ။ ကိုဘကြိုင်ကြီးရေ သူများတွေ သင်္ကြန်မှာ ပျော်နေကြတဲ့အချိန် တရားဘောင်မှာ ပျော်မွေ့မယ် ဆိုတဲအတွက် သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ ။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို (၂၉.၃. ၁၀)
Posted by သက်တန့်ချို at 9:23 AM 14 comments:
" ကယ်ကြပါဦးဗျို့... ကယ်ကြပါဦး.. သ...သရဲ ခြောက်လို့ဗျို့ "
" အလို ထွန်းခင်နဲ့ ညိုအေးတို့ပါလား " ရွာလူကြီး ဦးအေးမောင်က လှမ်းမေးလိုက်သည် ။
" ဟေ့ ဘာဖြစ်လာကြတာတုန်း ညကြီးမင်းကြီး အလန့်တကြားနဲ့ "
" ကဲကဲ သူတို့ကို ရေတိုက်လိုက်ပါဦး " အတော်ကြာအမော ဖြေစေပြီးမှ ထွန်းခင်က
" ဟို ဟို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ကိုင်းဖိုးငွေတွေ သွားချေတာပါ အဲဒါ ရှစ်ဆိပ်ရွာကနေ အပြန် ရွာ သင်္ချိုင်း လည်း ဖြတ်ပြီးဝါးရုံတောလည်း ရောက်ရော ၀ါးရုံတောကြီးက လေမတိုက်ပဲနဲ့ တဝေါဝေါ မြည်လာတယ် ပြီးတော့ ၀ါးရုံ ပင်ကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်နောက်ကို လိုက်လာလို့ ကျွန်တော်တို့ အသက်လုပြီး ထွက်ပြေး လာရတာပါ "
" ဟေ.. ဟုတ်လို့လားကွာ ငါတို့ရွာမှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုး တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး "
" ဟယ် ၀ါးရုံတောက သရဲခြောက်တယ်တဲ့ အောင်မလေး "
" ကဲကဲ ဒါဆိုလည်း လူစုပြီး ၀ါးရုံတောကို သွားကြည့်ကြရအောင် "
" ဟို ...ဟို.. ကျွန်တော်တို့တော့ ပြန်မလိုက်ရဲကြတော့ဘူး "
"အေး မင်းတို့ နှစ်ယောက်နေခဲ့ ကျန်တဲ့ ကာလသားတွေ ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ "
" အဆင်သင့်လိုက်တာ ဆရာတို့ရယ် အခုတလော ရွာမှာ ဂြိုလ်ဝင်နေတယ်ဗျာ ၀ါးရုံတောသရဲအခြောက်ခံရတဲ့ နှစ်ယောက်ကလည်း သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက်နဲ့ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါဦး ဆရာရယ် "
" သူကြီး သူကြီး ကိုထွန်းခင်ကြီး ဆုံးသွားလို့ တဲ့ အဲဒါသူကြီးကို လာအကြောင်းကြားတာပါ "
" ဟေ ဖြစ်ရလေကွာ ကဲ ကဲ ..ဆရာ တို့လည်း ရှိတုန်း တချက်လောက် ကြည့်ပေးပါဦး ဗျာ "
" အင်း ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေဗျာ ဒီလူကတော့ အသက်သေဆုံးသွားပါပြီ ကဲ နောက်တစ်ယောက်ကို သွားကြည့် ရအောင်ဗျာ "
" သရဲ...သရဲ..အောင်မလေး ..ကြောက်ပါပြီဗျ"
" ကိုသက်တန့်ရေ.. ကျွန်တော်တို့ တောလည်ကြရအောင် ၀ါးရုံတောသရဲ အကြောင်းလည်း စုံစမ်းရင်းနဲ့ပေါ့ ဘယ့် နှယ့် လည်း မကောင်းဘူးလား "
" ကောင်းသားပဲ ကိုနိုင်ဇော်ရသွားရအောင်လေ အမဲ မပစ်ရတာလည်း ကြာပေါ့ "
" ဆရာ....ဆရာ ဟို... အဖေက ဟင်းပို့ခိုင်းလို့ပါ "
" အော်..ဟုတ်ကဲ့..လာပြီခင်ဗျ "
" ကျေးဇူးပဲနော်.. ဒါနဲ့ ညီမ အဖေက ဘယ်သူတုန်း "
" ဦးအေးမောင်ပါ ဆရာ "
" အော်.. သူကြီးကိုး.. ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောပေးပါခင်ဗျ "
" ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးဆရာ "
" ဘယ်သူတုန်း ကိုသက်တန့်ရ "
" သူကြီးသမီးပါ ကိုနိုင်ဇော် ဟင်းလာပို့တာ ကဲ သွားကြရအောင် "
" ဖြစ်ပါ့မလား ကိုနိုင်ဇော်ရ မြွေတွေဘာတွေ တွေ့မှဖြင့် "
" အေးဗျ ကိုင်းပင်တွေက အတော့်ကို ထူတာပဲ ကျွန်တော်တော့ ဒီဝါးရုံတော အောက်ခြေမှာ လျှို့ဝှက်ချက် ရှိတယ် ထင်တယ်ဗျာ "
" ကဲ ညရောက်မှ သရဲခြောက်မခြောက်လာ ကြည့်တာပေါ့ဗျာ အခုတောဝင်စို့ "
" ကိုသက်တန့် ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေမကောင်းဘူးဗျ ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ နှောကူးကြီး (ပြောင်) ရှိနေတယ် ကျွန်တော်တို့က လေညှာအောက်ရောက်နေတယ်ဟို ကုန်းမြင့်ပေါ်တက်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်ဗျ လာလာ "
" ဒီလို ရှိတယ် ကိုသက်တန့်ရ ပြောင်တွေက သွေးနွေးသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ နာကျင်မှုဒါဏ်ကို အခံနိုင်ဆုံးနဲ့ ဒေါသအကြီးဆုံး အကောင်တွေပဲ စောစောက ကျွန်တော်ပစ်လိုက်တာက သူ့ရဲ့ လက်ဖျံရိုးအောက်တည့်တည့်ပဲ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ရန်မူမှန်းသိတော့ ဒီကောင်တွေက လတ်တလောဒါဏ်ရာကို မေ့သွားတယ်ဗျ ပြီးတော့ ရန်သူရှိ ရာကို ရန်ပြုဖို့ ပြေးလာတယ် ။ ဒါပေမယ့် နှလုံးကို ထိထားတဲ့ ဒါဏ်နဲ့ ကုန်းတက်ကြီးကို ဒင်း ငါးကိုက် လောက်အပြင် ပြေးမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာ "
" ဆရာနိုင်ဇော်ရေ ဒီည သရဲက ခြောက်ပါ့မလားဗျ"
" အင်းအသေအချာတော့ မပြောနိုင်ဘူးဗျ စောင့်တော့ကြည့်ရမှာပဲ "
" ဆရာ.. ဆရာ.. အဖေက ညဉ့်နက်နေပြီဆိုလို့ ဆရာတို့ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ ဆင်းလာပါဦး "
" ရှူးတိုးတိုး ဆရာ ဘာမှ ပြန်မပြောနဲ့ ကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ် "
" ဒီလိုဆရာရဲ့ ဒီအချိန်ကြီးမှာ သူကြီးက သူ့သမီး မိန်းမပျိုလေးကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ နေရာကို လာခေါ်ခိုင်းပါ့မလား စဉ်းစားပါဦး နောက်ပြီး ဆရာသတိထားမိလား ဒီမိန်းမက လုံးဝမျက်တောင်မခတ်ဘူးဗျို့ အမှန်တော့ ဒီလို တောတွေမှာ တောခြောက်တာတွေ နာနာဘာဝတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကို ရမလားလို့ လှည့်စားတာပေါ့ဗျာ "
" ကယ်ပါဦး ဆရာရယ် ဒါက ကျွန်တော်တို့ရွာကို လာနေကြ ကုန်သည်ကိုဘအေးပါ တစ်လ တစ်ခါလောက် လာ လေ့ရှိပါတယ် ဒီတစ်ခေါက်လာတာ ၀ါးရုံတောကြီး နားအရောက်မှာ လဲကျနေတာတွေ့လို့ ရွာသားတွေက သယ် လာတာပါ ဆရာဝန်တွေလည်း ဒီမှာ ရှိတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ သယ်လာတာပါ "
" ကဲဆိုစမ်းပါဦးဗျ ဘာတွေများ တွေ့ကြုံခဲ့ရလို့လဲ "
" ဒီလိုပါဆရာ ကျွန်တော့်နာမည်က ဘအေးပါ ကျွန်တော်က ဒီရွာကို တစ်လတစ်ခါတော့ ကုန်ရောင်းကုန်သည် အ လုပ်နဲ့ လာနေကျပါ အခုတစ်ခေါက် မြို့ က ထွက်လာကတည်းက ဘာမှမစားလာမိဘူးဆရာ ဒါနဲ့ ရွာတောင် ဖက်က တောစပ်က ၀ါးရုံတော အောက်မှာ ကျွန်တော်ခဏနားပါတယ် ။ ပြီးတော့ကျွန်တော် ဗိုက်ဆာလွန်းလို့ မြို့က ၀ယ်လာတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေ ပြုတ်သောက်ဖို့ ၀ါးရုံပင်အောက်မှာ မီးမွှေးပါတယ်ဆရာ အဲဒီလို မီး မွှေးပြီး ၀ါးနဲနဲလိုနေလို့ ကျွန်တော် ၀ါးရုံတောအစပ်က ၀ါးပင်ပေါက်လေးကို သွားနှုတ်မိပါတယ် ။ နှုတ်လိုက် တဲ့အခါ အထဲက သွေးတွေ ပန်းထွက်လာပါတယ် ကျွန်တော်ဖြင့်ကြောက်လိုက်တာ လွန်ပါရောဗျာ တောခြောက် တာလား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး ဗျာ "
" ကဲဒါဆို ကျွန်တော်တို့ကို အဲဒီ သွေးတွေထွက်တဲ့ နေရာ လိုက်ပို့နိုင်မလားဗျာ ကျွန်တော့်မှာ သေနတ်လည်း ပါ ပါတယ် "
" ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် "
" ဘယ့်နှယ့်တုန်း ကိုနိုင်ဇော်ရ ပြုံးလှချည်လား "
" ဟဲဟဲ ပြုံးဆို အဖြေကို ကျွန်တော်သိပြီဗျ ဒါပေမယ့် ကျိန်းသေအောင်တော့ ကိုသက်တန့်ရယ် ကျွန်တော်ရယ် ဒီည စမ်းသပ်မှု တစ်ခု လုပ်ရလိမ့်မယ် "
" ဟုတ်လား ကျွန်တော်ဖြင့်မ စဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ ဗျာ "
" ညရောက်ရင် ဒီသရဲ ဆိုတာကို ခင်ဗျား မျက်မြင်တွေ့ရပါစေ့မယ် ဗျာ...ဟားဟားဟား "
ဒေါက်တာနိုင်ဇော်ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်ုပ်လည်း အတော်ပင် စိတ်အားတတ်သွားမိလေသည် ။ သို့နှင့်....
" ကျွန်တော်ယူခိုင်းလိုက်တာတွေ ပါရဲ့လား ကိုသက်တန့် "
" ပါ ပါတယ်ဗျာ ဒီမှာ ရော့ "
“ ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်း ကိုနိုင်ဇော်ရ ကျွန်တော်တော့ ဘာမှကို မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး "
" ခင်ဗျားကို အဖြေမပြောခင် နောက်တစ်ခု ပြအုန်းမယ်ဗျ လာ "
" ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်းကို နိုင်ဇော်ရ ဒီဝါးရုံတောက အသက်များ ရှိနေလား "
" ၀ါးရုံတောကတော့ အသက်ဘယ်ရှိမလဲဗျာ ၀ါးရုံတော အောက်ခြေမှာ အသက်ရှိတဲ့အ ကောင်ရှိနေလို့ပေါ့ "
" ဗျာ ဘယ်..ဘယ်လို "
" ဒီလိုဗျ ဆရာ ကြားဖူးလား မသိဘူး ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ က သတ္တ၀ါကြီးတွေဟာ အလွန် အမင်းကြီး ထွားခဲ့ကြတယ် ဒါကြောင့် ကုန်းမှာ မြွေပွေး ရေမှာ ငရွေး ဆိုပြီး အဆိုရှိခဲ့ကြတယ်ဗျ ရေထဲမှာဆို ငရွေးဆိုတဲ့ ငါး ဟာ အကြီးဆုံးပဲ သူပြီးမှ ညံ သတ္တ၀ါတွေက အကြီးဆုံးပဲ မြေကြီးထဲမှာ ဆိုရင် ကုန်းနေသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ ဆိုရင်ပေါ့ ဗျာ မြွေပွေးက အကြီးဆုံးပဲဗျ ဒီကောင်တွေက အစာစားပြီးတာနဲ့ တစ်နေရာရာမှာ နှစ်နဲ့ ချီပြီး ငြိမ်ငြိမ် လေး နေနေလေ့ ရှိတယ်ဗျ ရာသီဥတုတွေပြောင်းတော့ သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာ လေဒါဏ်မိုးဒါဏ်နဲ့ အလေ့ကျ အပင်တွေ ပေါက်လာတယ် မျှစ်စို့လေးတွေ လည်းပေါက်လာပြီး နောက်ပိုင်းကြီးလာတဲ့အခါ သူတို့ ကိုယ်က အသား တွေကို ဖောက်ပြီး ၀ါးရုံပင်တွေပေါက်လာတယ် ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကောင်တွေက ငြိမ်နေတော့ မသိသာ ဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် ၀ါးရုံပင်ကို နှုတ်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့ ကိုယ်ပေါ်က အသားတွေကို ဆွဲနှုတ်သလို ဖြစ်ပြီး သွေး တွေ ထွက်လာတာပဲဗျို့ ပြီးတော့ သူတို့ ကိုယ်ပေါ်ကိုမီးမွှေးတော့ အပူဒါဏ်ကြောင့် မြွေကြီး လှုပ်ရှား လိုက်တဲ့အခါ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ၀ါးရုံတောကြီးပါ လိုက်ပြီး လှုပ်လာတာပေါ့ဗျာ "
" အော်.. လတ်စသတ်တော့ ဒီလိုကိုး ဒါဆို သူတို့ ခေါင်းကရောဗျာ "
" ခေါင်းကတော့ တောတွင်းတစ်နေရာမှာ ရှိမှာပေါ့ဗျာ "
" တော်သေးတာပေါ့ ဆရာရယ် ဆရာတို့လို ဗဟုသုတကြွယ်ဝလူမို့သာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ဖြင့် သရဲ ခြောက် တယ်ပဲ ထင်နေတာဗျာ ဒါနဲ့ ဒီမြွေကြီးကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဗျာ "
" ဒီလို ရှိတယ်ဗျာ ဒီကောင်ကြီး ငြိမ်နေတုန်းတော့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်လို့ ဗိုက်ဆာလို့ လှုပ်ရှား လိုက်ရင်ဒီရွာကလေးလည်း ပျက်သွားနိုင်တယ် ဒီတော့ ဒီကောင်ကြီးကို ရှင်းပစ်ရမယ်ဗျာ ရှင်းရမယ့် နည်းလမ်းကတော့ အခု ဒီရွာရဲ့ ဘေးက ခမာ တောင်ခြေမှာ ရထားလမ်းဖောက်ဖို့ တောင်တွေ ဖြိုနေကြတယ် ။ သူတို့ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဒီကောင်ကြီးကို မိုင်းနဲ့ ရှင်းပစ်ရမှာပဲ "
" အေးဗျာ ဆရာရဲ့ အကြံကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ ဒီကောင်ကြီးက သူ့ဘာသာနေတဲ့အတွက် ရက်စက်ရာ ကျပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ တချိန်လူတွေ ဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက် ရှင်းပစ်ရမှာပဲ ဆရာရေ "
Posted by သက်တန့်ချို at 1:06 PM 25 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:45 AM4comments:
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ မျှော်လင့်ချက်တွေကို မဆုံး...
စကားဝါမြေ လာလေအဆွေ ပုပ္ပါးမြေ
Biomedical Theory အတွေးစုများ
Angkor ဘုရားကျောင်းရဲ့ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာများ ( အပ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Baseball ရိုက်တံ
New Face Myanmar Models (NFMM)
ရုရှားနိုင်ငံမှ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ နေထွက်ပုံများ